असुरक्षित गर्भपतनबाट होशियार !
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य जीवनशैलीअसुरक्षित गर्भपतनबाट होशियार !
संसारभरि एक वर्षमा करिब ५ करोड गर्भपतन गराइने अनुमान छ । सरकारले महिलाको इच्छाले गर्भपतन गर्न पाउने कानून दिँदादिँदै पनि अझै पनि लाज, डर र अन्य कारणहरूले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । औषधीको सेवन गरेर मात्र पनि गर्भपतन गराउने महिलाहरू धेरै छन् ।
औषधि पसलबाट डाक्टरको परामर्शविना नै गर्भपतनका लागि औषधीहरू पनि सजिलै उपलब्ध हुने हुँदा महिलाहरू औषधि किनेर तोकिएको विधि हेरेरै सेवन गर्छन् । विवाहअघि गर्भवती भएकाहरू, लैंगिक भेद्भावका कारणले मेडिकलमा सजिलै पाइने औषधिको प्रयोग, वा नराम्रो ढंगले सञ्चालित क्लिनिकलगायत गैरकानूनी किसिमले गर्भपतन गराउने स्थानमा जाने गर्छन् ।
अनिच्छित रूपमा गर्भ रहन गएमा माथि उल्लेखित जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि गर्भपतन गराउन पाएहुन्थ्यो भन्ने महिलाहरूलाई लागेको हुन्छ । यस्ता गैरकानूनी रूपले गर्भपतन गराउँदा धेरै महिलाहरूको ज्यानसमेत जान सक्ने हुन्छ । ज्यान नगएको खण्डमा पनि विभिन्न प्रकारको संक्रमण हुने, पीडा भइरहने तथा बाँझोपन हुनेजस्ता समस्या आइलाग्ने सम्भावना रहन्छ । अथवा त्यस्ता औषधि तथा गैरकानुनी किसिमले गर्भपतन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि, वा अवस्था निकै जटिल भएपछि मात्र उनीहरू दर्ता गरिएका संस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।
अवैध रूपमा गर्भपतन गराउनेको संख्या उच्च रहेको र अहिले यो समस्या निकै जटिल रहेको छ । गर्भपतन नेपाल सरकारले तोकिएको ठाउँमा दर्ता गरिएका तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि यो कुरा कत्ति पनि लागु भइरहेको छैन । गर्भपतन भनेको तोकिएको ठाउँ र तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले काउनसेलिङ गराएर गराउनुपर्ने हो । तर, अहिले चोकचोकमा गर्भपतन गराउने ट्याब्लेटहरू सजिलै उपलब्ध हुने हुँदा गर्भमा रहेको भ्रुण कति हप्ताको छ, कस्तो अवस्थामा छ, बच्चा कहाँ बसेको छ अनुमान नलगाई प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
कतिपय कमसल औषधिहरूको प्रयोग, खाने विधि गलत भएमा, काउनसेलिङको कमीका कारणले औषधि खाएर अत्यधिक रक्तश्राव हुने गर्छ । अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि मात्र धेरै जना अस्पताल आउने गर्छन् । यस्तो समयमा रगत चढाउनु पर्ने, क्युरेट गरेर पाठेघर सफा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अत्यधिक रक्तश्राव भएमा र समयमा उपचार हुने नसकेमा ज्यान पनि जान सक्छ । विवाहित तथा अविवाहित महिलाहरूले गर्भपतन गराउँछु भन्छन् भने पाइन्छ तर, विवाहअघिको सम्बन्धले समाजमा बद्नाम हुने, पारिवारिक र सामाजिक बहिस्कारमा पर्ने डर तथा लाजका कारण, कतिपय पेटमा भएको बच्चा १२ हप्ताभन्दा ठूलो भइसकेपछि, वा धेरैले छोरा, छोरीको भ्रूण छुट्टयाएर अवैध तरिकाले गर्भपतन गराउने तर, कोशी अस्पताल जस्ता गर्भपतनका लागि तोकिएका ठाउँहरूमा उनीहरू आइनपुग्ने वा अवस्था अत्यन्तै गम्भीर भएपछि मात्र आउने गरेका छन् ।
कतिपय महिलाहरू भ्रुण पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन, धेरै सन्तान भएका, वा पेटमा रहेको बच्चा १२ हप्ता कटिसकेपछि गम्भीर अवस्थामा समेत आउने गर्छन् । अवैध तरिकाले गर्भपतन गर्ने ठूलो धन्दा नै रहेपनि यसको वास्तविक डाटा भने कसैले दिन सक्दैन । जति पनि पैसा खर्चेर गर्भपतन गर्न तयार हुने हुँदा अवैध तरिकाले गरिने गर्भपतनले युवती तथा महिलाको स्वास्थ्य र पैसा दुवैलाई क्षति गर्छ । ज्यान नै जाने धर भए पनि उनीहरू तोकिएका संस्थामा पुग्दैनन् र पुग्न पनि चाहँदैनन् । गर्भपतनका लागि चोकचोकमा रहेका औषधि पसलमा उपलब्ध हुने औषधि सेवन गरेर त्यसका जोखिम झेल्नेहरू यहाँ हजारौं छन् जुन हामीले अनुमान पनि गर्न सकेका हुँदैनौं । डर, लाज, शिक्षाको कमी, परामर्श र पूर्ण परीक्षणविना अवैध तरिकाबाट गरिने गर्भपतनबाट महिलो मृत्यु हुने जोखिम धेरै हुन्छ ।
अस्पतालहरूले महिलाहरूको मृत्युदरको तथ्यांकहरू बनाए पनि हामीले देख्ने संख्या निकै कम मात्र हो । यहाँ केलाएर हेरेमा अन्य धेरै देखापर्ने गर्छन् । त्यसैले, गर्भपतन सेवाका लागि कानूनी मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । गर्भपतन सेवा दिने संस्था र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी दुवै सूचीकृत तथा तालिम लिएका हुनुपर्छ । पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका वा मान्यता प्राप्त गरेका संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लोगो राखिएको हुन्छ । यस्ता सूचीकृत संस्थामा तालिमप्राप्त चिकित्सकबाट गरिएको गर्भपतनबाट हालसम्म एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन । एक प्रतिशतभन्दा पनि कममा मात्र सामान्य समस्या देखिने गरेको तथ्यांक छ ।
गर्भपतन गराउँदा तीन महिनाभित्र (१२ हप्ता) मा कानूनी रूपमा तोकिएको ठाउँमा गएर तालिमप्राप्त तथा अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीबाट, उपयुक्त औजार र साधनको प्रयोग गरी सफासँग गरिएको छ भने मात्र गर्भपतन गराउनुपर्दछ । । यसले गर्दा पाठेघरमा संक्रणम गर्ने जीवाणुको प्रवेश हुँदैन र महिलाको स्वास्थ्यमा पनि हानि पुग्दैन ।
(कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत स्त्री रोग तथा प्रसुती विशेषज्ञ डा जीवन धमलासँग कोशी अनलाइनका लागि अंकिता ताम्राकारले गरेको कुराकानीमा आधारित)